Carmo oo loo dhisayo garoon ay ka soo degaan diyaaradaha yar yar ee adeegyada wadda (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 18, 2013 5:28 b 0
Carmo, August 18, 2013 – Degmada Carmo ee gobolka Bari waxaa markii ugu horeysay la qorsheynayaa in halkaas laga hir-geliyo garoon kuwa diyaaradaha ah, balse aan weynayn.
Shalayto ayaa si rasmi ah loo dhagax dhigay dhinaca koonfureed ee Carmo meel loo qorsheeyey in laga dhiso garoonka diyaaradaha ee magaaladaas ay yeelan doonto, garoonkaas ayaa looga faa?iideysan doonaa adeegyo badan.
Duqa degmada Carmo Ibraahim Abshir Maxamed oo la hadlay maanta Radio Daljir ayaa sheegay, muhiimada garoonkaas in ay tahay in la helo meel degmada looga soo dejiyo adeegyada muhiimka ah sida dkhaatiirta iyo adeegyada caafimaadka.
? Garoonka dhul ayaa loo qabtay waana la dhagax dhigay, wixii dhisme ah ee intaas dheer waxay u taala dadka reer carmo, ganacsatada iyo bulshada gobolka Bari, baahi weyn ayaa keentay in la dhiso garoonka? ayuu yiri Mudane Ibraahim.
Mudane Ibraahim Abshir wuxuu sheegay in garoonkaasi uusan saameyn ku yeelan doonin adeegyada garoonka caalamiga ah ee Boosaaso, wuxuuna ku tilmaamay Garoonka Carmo mid ay ka soo degayaan keliya gaadiidka cirka ee yar yar.
Adna Aways oo Daljir ka tirsan ayaa waraysatay duqa degmada Carmo Ibraahim Abshir